“Anigu waxba ma saxin inta kulanka uu socday, mana eedeenayo garsoorka ciyaarta” – Luis Enrique – Gool FM
“Anigu waxba ma saxin inta kulanka uu socday, mana eedeenayo garsoorka ciyaarta” – Luis Enrique
(Spain) 16 Okt 2018. Tababaraha xulka qaranka Spain Luis Enrique ayaa qirtay inuusan wax sax ah sameynin intii lagu jiray qeybtii nasashada ee kulankii England, isagoo sheegay inuusan ku eedeyn karin garsooraha ciyaart wixii k dhacay ciyarta.
Xulka qaranka Spain ayaa kala kulmay dhigooda England guuldaro lama filaan ee 3-2 ah, kulankii ay ku wada ciyaareen tartanka UEFA Nations League.
Kulanka kadib ayuu Luis Enrique la hadlay wargeyska “Marca” ee dalka Spain wuxuuna kaga warbixiyay dareenkiisa kaga aadan guuldaradii ay kala kulmeen xulka England.
“Kooxda ma aysan u baahneen inaan ku sameeyo wax isbadal ah, inta lagu jiray qeybta nasashada, kaliya waxay u baahnaayeen talo celin, waana waxaan ku sameeyay qolka labiska, kahor inta aan la baasan qeybta labaad”.
“Ma eedeenayo garsoorka ciyaarta, sababtoo ah shaqadiisa waa mid aad u adag, waana inaan aqbalnaa go’aamadiisa”.
SAWIRRO: Thierry Henry oo Casharkii ugu horreeyay u dhigay Monaco
Yaa adkaan lahaa haddii ay tartamaan Horyaalada Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 iyo Bundesliga...(Eeg SHAX CAJIIB ah oo midkiiba laga soo xulay)